Ungaqeda Kanjani Ama-aphid: Izindlela Eziyi-13 Zobuwula - Izinambuzane Zengadi
Izintwala Ezicasulayo: Konke Mayelana Ne-Aphididae Nendlela Yokuziqeda
Ukubuka konke kwe-Aphid
Abukeka Njani Ama-aphid?
Umjikelezo Wempilo We-Aphid
Indawo ejwayelekile yama-Aphid
Ungaqeda Kanjani Ama-aphid
Ukulawulwa Kwe-organic Aphid
Izintuthwane nama-Aphid: Kubasula Bobabili
Ukulawulwa Kwe-Aphid Yezemvelo
Izinambuzane Ezizuzisayo Ukutakula!
Umbuzo: Izitshalo zami zinamaqabunga agobekile ngemuva kokuhamba kwezinhlwathi! Usizo?
Q: Ngabe i-aphid iyagxuma?
O, ngiyake ngizonde ama-aphid. Lezi zinambuzane ezincane ezikhathazayo zimunca impilo ezitshalweni zami (empeleni!), Futhi nomaphi lapho zihamba khona, ziletha ukubhujiswa kwezitshalo ngemuva kwazo. Ukuba khona kwabo kubangela izinkinga ezinkulu kakhulu ukuba zenzeke engadini yami.
Kepha kunendlela yokuqeda ama-aphid endaweni yakho, futhi ngokugcina phezulu enkingeni, ungabagcina kude neminyaka ezayo. Namuhla, ngizokutshela konke odinga ukukwazi ngalezi zinambuzane ezincane, ukuthi ungazilapha kanjani izinkinga ezizibangelayo, nokuthi ungazikhipha kanjani engadini yakho unomphela!
Izixazululo ezihamba phambili zokulawulwa kwe-Aphid:
Isepha Ephephile Yokubulala Izinambuzane
Ikhaya Eliphephile Lomkhiqizo Nengadi Yengadi
Thatha uwoyela we-Neem we-Bliss Cold-Sicindezelwe
Izinketho Zokulawulwa Kwemvelo:
Ku-P vimbela ama-Aphid, Sebenzisa:
Amagama ajwayelekile Izintwala, izintwala zezitshalo, izimpukane eziluhlaza, izimpukane ezimnyama, izimpukane ezimhlophe, ama-rose aphid, ama-amazambane aphid, ama-aphid abhontshisi, ama-aphid eklabishi, ama-aphid peach aluhlaza, ama-aphid we-wooly, ama-apula we-apula we-wooly, ama-melon aphid, ama-aphid izimpande, nezinye eziningi
Amagama Esayensi Izinhlobo ezingaphezu kuka-4400 (ezingama-250 eziyingozi kwezolimo / emahlathini).
Umsuka Emhlabeni wonke, kepha khetha izindawo ezipholile
Izitshalo Zithintekile Izitshalo eziningi zokudla (ngaphandle kukagalikhi kanye ne-chives), izihlahla zezithelo, ama-roses nezinye izitshalo eziqhakazayo.
Izixazululo ezivamile Izinsipho zokubulala izinambuzane, umhlaba onamafutha, izifutho ze-pyrethrin, izifutho zikawoyela wewolintshi, uwoyela we-neem, ufulawa, izinambuzane ezizuzisayo, izembozo zemigqa, indwangu yesembozo ekhanyayo, izitshalo zokutshala izihlobo noma izitshalo ezixosha
Ngakho-ke, ziyini izintwala? Umndeni wezinambuzane u-Aphididae ubanzi ngendlela emangalisayo. Kunezinhlobo ezingaphezu kuka-4400 zama-aphid, cishe ezingama-250 zazo ezonakalisa izitshalo ezivame kakhulu ezingadini. Kukhona izimbungulu ezincane ezimnyama. Kukhona izimbungulu ezincane eziluhlaza. Kukhona izimbungulu ezincane ezimhlophe. Eminye ibomvu ngokubomvu, ibomvana, noma nsundu. Zimunca ama-saps esitshalo emaqabungeni ezitshalo zakho, bese izitshalo ziyafa.
izitayela ezinhle kakhulu zokuvikela ukukhula kwezinwele
Ingabe lokhu kubonakala kwesabisa? Akufanele kube njalo. Ama-aphid wonke anemijikelezo yokuphila efanayo, futhi wonke angahlulwa ngendlela efanayo. Noma ngabe ulwa nama-rose aphid, amazambane aphid noma ama-wooly aphid, lisekhona ithemba lokuthi angahlulwa, inqobo nje uma uthatha isinyathelo ngokushesha.
Iningi lama-aphid limile okwepheya, linezimpondo ezinde nemilenze emide. Ezinye izinhlobo, njenge-wooly aphid, zibonakala zinengubo yoboya noma i-waxy. Lokhu kudalwa yimfihlo abayikhiqizayo. Ezinye izinhlobo azinayo imfihlo. Njengoba kushiwo ngenhla, ziza ngemibala eminingi nemibala, kufaka phakathi omnyama, omhlophe, oluhlaza okotshani, obomvu, opinki, onsundu, noma ongenabala.
Izintwala ezindala ngokuvamile azinazimpiko, yize izinhlobo eziningi zama-aphid zinezinhlobo ezithile ezinamaphiko. Lokhu kubenza bakwazi ukusakazeka kalula kwezinye izindawo, ikakhulukazi uma inani labantu liphezulu noma badinga ukusabalala ukuthola okuningi abangondla ngakho. Kwezinye izimo, lokhu kwenzeka kuphela entwasahlobo noma ekwindla, kepha ezinye izinhlobo zingathuthukisa amafomu anamaphiko njengoba kudingeka ukuze kugcinwe inani labantu likhula.
Ama-aphid amaningi azohlangana ngaphansi kweqabunga ukuze amunce ubisi kuwo. Azivamisile ukuphazamiseka, noma ngabe iqabunga liyasuswa. Ngezikhathi ezithile ungathola amaqabunga anamakhulu namakhulu awo abambelele ngemuva.
wenzeni uLori loughlin
Esinye sezizathu sokuthi ama-aphid asakazeke kakhulu, ikakhulukazi ezindaweni ezinjengeCalifornia ezinamazinga okushisa aphakathi nendawo, yingoba akudingeki ukuthi zikhweshane ngaphambi kokuba zibe nezincane. Izintwala ezindala zesifazane zizala ama-nymphs abesifazane ngenqubo eyaziwa ngokuthi yi-parthogenesis. Eqinisweni, ezifundeni ezilinganiselayo, ama-aphid angahlala unyaka wonke, futhi inani labantu lingakhula ngokuqhubekayo.
Ngokungafani nezinye izinambuzane eziningi, ama-aphid awavamisile ukubeka amaqanda ngesikhathi sezulu esifanele. Umuntu wesifazane omdala uzozala amankankane akhe. Labo nymphs bazobe sebedlula ezigabeni ezine zokuthuthuka, bechitha isikhumba sabo njengoba bekhula ngosayizi. Ezimweni ezifudumele, ukuba mdala kungathatha okungenani izinsuku eziyi-7-10 ukukhula ngokugcwele. Futhi njengoba i-nymph esekhulile ingaba nezingane ezingaba ngu-80 ngeviki, ukukhula kwabantu kushesha ngendlela emangalisayo.
Izinhlobo ezimbalwa zama-aphid ezihlala ezindaweni ezibandayo ebusika zizokhiqiza amafomu ezocansi, anamaphiko ngasekupheleni kwehlobo nasekuqaleni kokuwa. Lezi zinhlwathi zizokhwelana zizalele amaqanda azo ngaphansi kwamaqabunga ezitshalo ezingapheli. Amaqanda awaqanduki kuze kube isimo sezulu silungile, okusho ukuthi kufika intwasahlobo, okunye ukuphakama kwabantu be-aphid kuzokwenzeka ngokushesha.
Akudingeki ukuthi, ukunciphisa inani lama-aphid egcekeni lakho kubalulekile, futhi kufanele kwenziwe ngokushesha nangokungaguquguquki ngokwanele ukuthi kungagcwalisi nje kuphela izinombolo zabo.
Ama-aphid athanda ukuhlala lapho adla khona, futhi lokho akudlayo kuncike ezinhlotsheni ze-aphid. Zitholakala ezithelweni eziningi zezithelo nemifino, kwezinye izitshalo eziqhakaza njengama-roses noma ama-chrysanthemums, ezihlahleni nakwezinye izihlahla. Imvamisa, ama-aphid angenazimpiko ahlala efihliwe ngaphansi kwamaqabunga, kodwa kulula kakhulu ukubona ukutheleleka okukhulu njengoba kuhlanganiswe ndawonye ngobuningi.
AmaKoloni angakhonjwa futhi uma isikhunta esimnyama, sooty siqala ukuvela ezitshalweni, ngoba lokho kuyisibonakaliso sesikhunta esikhula emfihlakalweni we-aphid eyaziwa ngokuthi i-honeydew. I-Honeydew iyinto enamathelayo, emnandi engadala izinkinga eziningi (njenge-sooty mold), futhi eheha izintuthwane ukuthi zize zizodla kuyo. Ezinye izinhlobo ze izintuthwane empeleni zilima ama-aphid . Uma uthola isikhunta se-sooty emaqabunga ezitshalo zakho, kungenzeka ukuthi une-aphid infestation enamandla!
Ama-aphid aluma ngaphansi kweqabunga futhi adle ubisi lwesitshalo olugcinwe eqabungeni. Ngenkathi ama-aphid ambalwa esitshalweni enganele ukubanga ukukhathazeka okukhulu, inani elikhulu labantu elimunca ubisi lingadala ukuthi izitshalo ziphuzi, zibune, futhi zibune. Njengoba ama-aphid eba ngabathwali banoma yiziphi izifo zezitshalo lesi sitshalo abekade besidla sinazo, zingasabalalisa izifo uma zihambela kwesinye isitshalo. Ezinye izinhlobo ze-aphid nazo zithwala obunye ubuthi bezitshalo, futhi lapho zondla, zizothelela izitshalo ngalobo buthi.
Iningi lama-aphid lithanda ukukhetha uhlobo olulodwa lwesitshalo. Isibonelo, i-aphid yamazambane kungenzeka ukuthi idle izitshalo zamazambane. Noma kunjalo, kunezinhlobo ezithile ze-aphid ezizodla izinhlobo zezitshalo eziningi. Esinye sezibonelo yi-aphid eluhlaza okotshani. Ama-aphid aluhlaza okotshani ngokuvamile anamathela ezihlahleni zezithelo zamatshe ezinjengamapentshisi nama-plums, kodwa futhi azodla ngenjabulo utamatisi, upelepele, isipinashi, ulethisi, izaqathe, ummbila, amakhukhamba afana namakhukhamba, amakhabe, nesikwashi, nezitshalo eziqhakaza izimbali njengama-rose.
Izinhlobo ezimbalwa, njenge-lettuce root aphid, empeleni zizoncela ezimpandeni zesitshalo kunamaqabunga noma iziqu. Lezi kunzima ukuzibona njengoba zingaphansi komhlaba, kodwa zidala ukulimala okufanayo kwezinye izinhlobo ze-aphid.
Ngenkathi zingabonakala zingenakunqotshwa, kunezinyathelo ezithile ongazithatha ukuqeda usongo lwe-aphid engadini yakho. Njengama-infestations amaningi, ungaqala ngokuncinza noma ngokusika amaqabunga agcwele kakhulu ezitshalweni. Kepha kuthiwani uma udinga usizo oluthe xaxa, futhi ukuphina nokuthengela akusasaphathi?
izimpawu zobudlelwano obukhulu
Lapho uzama ukubulala izintwala, imikhiqizo efana Insipho Yomkhiqizo Ephephile kungasiza kakhulu. Le nsipho yokubulala izinambuzane ayibulali nje kuphela ama-aphid, kodwa nezindlebe, izibungu nezimpukane ezimhlophe, izintethe, izimbungulu ze-mealy, izikali ezithambile, nezinye izinambuzane eziningi. Yize igama elithi 'insipho' lingadida njengoba lingafani nensipho yakho ejwayelekile yokudla, lenza umsebenzi omangalisayo wokususa ama-aphid ngokugqokisa imizimba yawo ukuze angakwazi ukuphefumula nokuminyana. Kungokwemvelo (isithako esisebenzayo singusawoti we-potassium wamafutha acid) futhi singasetshenziswa yonke indlela phakathi nomjikelezo wempilo yesitshalo kuze kufike esikhathini sokuvuna.
Uma inkinga yakho inzima kakhulu, ukufaka amanye ama-pyrethrins kumxube kuyasiza. Ikhaya Eliphephile Lomkhiqizo Nengadi Yengadi ihlanganisa usawoti we-potassium wamafutha acid nama-pyrethrins, okwenza kube yindlela ephumelelayo yokubulala ama-aphid kanye nezinye izinambuzane eziningi. Le nketho ilungele abantu ababhekene nezinkinga ezisindayo zombili izintwala kanye nezinye izinambuzane ezinjengomiyane, izintuthwane kanye nama-roaches.
Thatha uwoyela isebenza kahle ukusula ama-aphid, futhi. Amafutha agqokisa amaqanda futhi awaminyanise, futhi enza okufanayo nakubantu abadala.
TO ikhambi elenziwe ekhaya ekubulaweni kwama-aphid ukuxuba ilitha lamanzi nethisipuni lensipho yesitsha kanye nengcosana yepelepele ye-cayenne. Yihlanganise kahle bese uyisebenzisa ngqo ezitshalweni. Upelepele we-cayenne usebenza njengomuntu oxosayo, futhi insipho yezitsha izogcoba izinambuzane futhi ibangele ukuthi zishaye.
Ngilokhu ngikusho ukuthi ezinye izinhlobo zezintuthwane zifundisa ama-aphid for honeydew azo. Kwenzeka kaningi kakhulu kunalokho abantu abaningi abakucabangayo, futhi uma ubona izintuthwane eziningi zehla zenyuka izitshalo zakho, hlola amaqabunga ama-aphid okungenzeka ukuthi aya lapho!
Enye inkinga uma unezintuthwane ezilima izintuthwane, ikakhulukazi ezihlahleni zezithelo noma ezitshalweni ezinamandla, ukusebenzisa umkhiqizo ofana nalona I-Tanglefoot Tangle-Trap . Lesi yisixazululo esinamathelayo esizobamba izintuthwane zimasha ngeziqu, amagatsha noma iziqu zezihlahla futhi zizivikele ekulimeni ama-aphid noma ekutholeni izithelo. Lokhu futhi kungasebenza kuma-aphid kuma-rose uma engamakholoni ant antulima, yize engeke avimbele izintwala uqobo. Lokhu akusebenzi kahle ezitshalweni ezithambile, futhi kuyizinto ezinamathelayo ngokumangazayo, ngakho-ke qaphela lapho usebenzisa lokhu ezungeze izingane noma izilwane ezifuywayo.
Imvamisa, ukuthola ama-aphid ezitshalweni ekuqaleni kuyindlela enhle yokunciphisa ukubhujiswa kwezitshalo zakho. Ukusebenzisa i-Bug-Blaster noma esinye isifutho namanzi alula ukushaya ama-aphid emaqabunga kuzozinciphisa noma kuziyeke ngokuphelele.
Okufanele kubhekwe ukuthi ama-aphid akhangwa izitshalo ezinokukhula okusha okuthambile. Ukunisela ngokweqile noma ukufaka umquba ngokweqile ezitshalweni zakho kungazenza zikhange kakhulu kubantu be-aphid, futhi kungahle kube nezinye izincazelo ezimbi ngezitshalo zakho. Ngenkathi ungeke uvimbele ukukhula okusha ezitshalweni ezisencane (futhi awufuni!), Ukugcina izitshalo zakho ezindala kahle kukusiza ukuba uzivikele ekuhlaselweni yi-aphid.
Uma uhlala endaweni lapho amaxoxo zivamile, khuthaza umuntu ukuba aphile ngaphansi kwezitshalo zakho ezidliwayo! Amaxoxo athanda ukudla ama-aphid kanye nezinye izinambuzane ezinambuzane ezinjenge izimbungulu zesikwashi , izibungu zeklabishi , futhi abaklabishi beklabishi .
Enye yezindlela ezithandwa kakhulu ukuqeda ama-aphid ngokombono wezemvelo ukuqinisekisa ukuthi izidlo zazo zemvelo zisabalele engadini yakho. Ukuze wenze lokhu, unga khipha ama-ladybugs , futhi njengoba ama-ladybugs edla ama-aphid ngenjabulo impela, azogawula izinambuzane zakho zasengadini. Uma ukhipha ama-ladybugs, kwenze kusihlwa noma kusihlwa, ngoba azondiza ngokushesha emini. Fafaza inkungu enhle yamanzi ezitshalweni ngaphambi nje kokuba ukhulule, njengoba umswakama ungabenza banamathele isikhathi eside. Ngenkathi zisazogcina zindize ziyokwakha amakoloni azo, kufanele zisule izintwala zakho ngaphambi kokuba zihambe.
Ezinye izinambuzane ezizuzisayo zifaka phakathi sibongile futhi Iminyovu eyisimungulu . Isibungu esine-lacewing singadla kuze kufike kuma-aphid angama-600 ngaphambi kokuba sikhule. Ngenkathi iminyovu yesinambuzane ingadli ama-aphid, idla ezinye izinambuzane ezingadla ama-aphid bese zigcwalisa ingadi, futhi ukuba nazo egcekeni lakho kuzogcina ama-aphid ama-ladybugs nama-lacewings esikhundleni sezinambuzane.
Uma ukhetha ukusebenzisa izinambuzane ezizuzisayo, ungakhuphula amathuba okuthi zizonamathela ngokungeza izitshalo eziqhakazayo ezikhetha ukuphuza umpe ngazo lapho ama-aphid engekho. Ukutshala ama-chives, i-caraway, i-dill, i-fennel, i-marigolds, i-cosmos, ne-alyssum emnandi engadini yakho kungasiza ukugcina i-ladybug yakho kanye nabantu abalahla i-lacewing bazinzile, noma ngabe ama-aphid esetshenziswa kakhulu.
Unganikeza futhi ngezindlu izinambuzane zakho ezizuzisayo. An indlu yezinambuzane ingahlinzeka indawo yokukhosela ama-ladybugs, ama-lacewings, nezinyosi ezingashadile phakathi kwezinye izinhlobo zezimbungulu ezinhle. Ngenkathi kungekho ziqinisekiso zokuthi izinambuzane zakho ezizuzisayo zizohlala unomphela, kuyisimemo esihle esivulekile, futhi uma benquma ukuhlala, uzoba nempova kanye nezilwane ezidla ama-aphid zemvelo ngaso sonke isikhathi.
Umhlaba we-diatomaceous isebenza ngempumelelo emangalisayo njengomuntu oxosha izinto. Enziwe ngamagobolondo anempuphu ecolekileyo aphuma kuma-diatom, umhlaba we-diatomaceous grade-grade uzoklwebha imizimba ethambile yezinambuzane ezikhasa phezu kwawo, yize ingenabungozi ngokuphelele kubantu nasezilwaneni ezifuywayo. Ingafafazwa noma ifuthwe uthuli phezu kwayo yonke indawo yesitshalo ukudala umgoqo oxosha izinto, yize udinga ukuphinda usetshenziswe ngemuva kwezimo zemvula.
Masingakhohlwa i- thatha uwoyela . Leli thuluzi elenza imisebenzi eminingi limboza ingaphandle le-aphid futhi libangele ukuthi libhebhe futhi life, futhi linezinto ezibulala ukhunta ezisiza ukusula ukukhula kwefungal njenge-powdery isikhutha kanye nesikhunta esimnyama sooty. Kuyasiza futhi ukunciphisa ijubane lokuphindaphinda ngokusebenza njengomuntu oxosha amaqabunga neziqu zezitshalo zakho.
Ikhambi lesidala lezintwala uku izitshalo zothuli nefulawa , njengoba ufulawa uzobamba ama-aphid futhi uwavimbele ekunamatheleni nxazonke. Njengomhlaba onamafutha, lokhu kudinga ukuphindwa uma lina.
Ukutshala komngane kungasiza ukuvimbela ama-aphid ukuba aqale ukuhlala. Ezinye izitshalo, ezinjengemasinadi kanye nama-nasturtium, empeleni zizodonsa izintwala kubo. Lokhu kusho ukuthi ungakwazi ukutshala isinaphi noma i-nasturtium njengesitshalo sokubamba ukugcina ama-aphid kude nezinye izitshalo zakho. Ngokufanayo, kunezitshalo ezixosha ama-aphid njenge ukubamba , ugaliki , nama chives. I-Garlic kanye ne-chives zisiza kakhulu kuzungeze ama-roses noma ezinye izitshalo eziqhakazayo ezivame ukudweba ama-aphid, kepha zingasetshenziswa ukwenza okuhle nasezitshalweni zakho ezidliwayo futhi - ikakhulukazi ulethisi .
Ungadambisa ukuhlaselwa kwe-aphid kwasekuqaleni ezitshalweni zakho ezincane ngokuthi ukukhulisa izitshalo zakho ngaphansi kwezembozo zomugqa . Lokhu kuzogcina ama-aphid kude nalawo mahlumela amancane futhi ashiye ngokuphelele, kepha lapho izitshalo zakho ziqala ukuqhakaza, kuzodingeka ususe izembozo ngenhloso yokuthola impova.
Indwangu yes mulch enemibala yesiliva kukhonjisiwe ukuthi kuyasebenza impela ekuxosheni ukutheleleka kwe-aphid, ikakhulukazi phakathi nezinyanga ezifudumele zonyaka. I-squash yasehlobo, ama-curcurbits, nezinye izitshalo ezihlobene kukhombise amazinga aphansi kakhulu we-aphid infestation, kanye nesivuno esikhuphukile, lapho kusetshenziswa i-mulch ebonakalayo.
Impendulo: Ngeshwa, noma ngabe usuthole ukuthi ungazibulala kanjani izintwala futhi ususe nesinambuzane, amaqabunga asonjiwe angahlala. Uma lesi kuyisitshalo esifana ne-chard yaseSwitzerland noma enye imifino enamaqabunga, akukho okuningi ongakwenza ukubuyisela ukwakheka kwamaqabunga, yize ungazama impela ukukhuthaza ukukhula kwamaqabunga okusha. Uma iseqabungeni elingadliwayo, ukushiya amaqabunga engaphelele kulungile, njengoba ezoqhubeka nokwenza i-photosynthesize. Kepha ngezinhloso zokubuka, ungagunda amaqabunga agobeke kakhulu uma nje kusekhona amanye amaqabunga amaningi asele ukugcina isitshalo siphila.
A: Kungenzeka ukuthi uhlanganisa ama-aphid (abizwa ngezinye izikhathi ngokuthi ama-whiteflies) nezimpukane ezimhlophe zangempela. Izimpukane ezimhlophe zangempela zibizwa nangokuthi 'izintwala zezitshalo ezigxumayo', okuyinto edida kakhulu njengoba izintwala zivame ukubizwa 'ngezintwala zezitshalo'. Ama-aphid ngokwawo awagxumeki, yize ekhasa (futhi ezimweni ezinqunyelwe angakwazi ukundiza). Ngakho-ke cha, ama-aphid awagxumi!
izikipa zikakotini zemikhono emifushane yabesifazane
Njengoba ukwazi ukubona, uma ungahlaseli ama-aphid lapho uqala ukuwathola, azozala ngokushesha futhi asakazeke ukuze athathe ingadi yakho. Lezi zinyathelo nezinyathelo ezilula zingakusiza ukuthi ubulale izintwala uma uzibona, futhi ngenhlanhla ungazigcina zingaphandle kwegceke lakho ngokuzayo. Zikhona yini izinyathelo engingazimbozile ongazincoma empini yokulwa nezintwala? Yabelana ngawo kumazwana!
Bona le ndatshana kuSteemit futhi (ngijoyine laphaya!)
I-One Party-Dress Silhouette Zonke Izidingo Zentombazane E-Busty
Umvini Wamazambane Amnandi: Khulisa nokunakekela i-Ipomoea Batatas
Izitayela ezi-5 ezinkulu ze-Nail Ezenzeka Njengamanje: Yikuphi Ongakugqoka?
UNorma Kamali, uMklami we-Iconic Fashion, Uqine Kakhulu Kuneminyaka Engama-75
Izinhlobo Ezi-16 Ezihlaselwayo Ezithengiswa Ezikhungweni Zensimu Akufanele Uthenge
Izibani Zokukhula Zangaphakathi
imiklamo epholile yezipikili yezipikili ezimfushane
kungani imikhonto kaBritney ine-conservatorship
imijovo yezindebe eduze kwami ​​amanani